Consumer accessories electronic xirmo
Bacda dhagaha / dhagaha
Bacda badan (awoodda banki ama kiiska kamaradda is haysta)
alaabta isboortiga dibada
Talking about the future outlet and development direction of plastic bag manufacturers
Since the 21st century, with the advancement of science and technology, the focus of society has long been not only on the issue of wealth. Whether online or in newspapers, there will be extensive coverage of environmental issues. This is what happens when a society develops to a certain stage. I...Sii akhri »
Talking about the material difference of customized plastic bags
Plastic shopping bags are commonly found in supermarkets and shopping malls, and ordinary people also use these film bags indispensable in their lives. Usually, there are tens of thousands of customized shopping bags in shopping malls and supermarkets. Because of the particularity of plastic film...Sii akhri »
Sida loo doorto soo saaraha bacaha caagga ah
Waqtiga boostada: Meey-25-2022
Marka shirkadaha ama qaybaha ganacsigu ay habeeyaan bacaha, waa inay doortaan warshado ku haboon, si ay u helaan qiimo iyo tayo badan oo macquul ah. Wejiga soo saarayaasha kala duwan ee suuqa, sida loo sameeyo doorasho, dhinacani waa dad badan oo ka walaacsan dhibaatada, hadda ... Sii akhri »
Sidee kuwa bacaha sameeya u sameeyaan qabanqaabada wax soo saarka
Soo-saare kastaa waa inuu si fiican u qabtaa shaqada wax-soo-saarka ee u dhiganta, oo uu wax walba u sii diyaariyo, si shaqada wax-soo-saarka loo dammaanad qaado si habsami leh. Soosaarayaasha bacaha balaastikada ah sidoo kale waxay u baahan yihiin inay sameeyaan habayntooda wax soo saar, laakiin meelo badan ma ha... Sii akhri »
Soosaarayaasha bacaha caaga ah waxay ka hadlaan saamaynta bacaha la sameeyay
Badeeco kastaa waxay leedahay door u gaar ah, waxaana lagama maarmaan ah in la fahmo dhinacyada ku habboon si loo bartilmaameedsado, oo si firfircoon loo go'aamiyo xaaladdeeda, si loo isticmaalo si fiican. Bacaha balaastikada ah sidoo kale waxay leeyihiin door iyaga u gaar ah. Hadda waxaan fiiro gaar ah u yeelan doonaa xaaladda gaarka ah, si aan si wanagsan pl... Sii akhri »
Qodobbada aasaasiga ah ee bacaha la habeeyey ee dukaamada waaweyn
Dukaamada waaweyn iyo ganacsatada kale, bacaha ay adeegsadaan dhamaantood waa kuwo si gaar ah loo sameeyay, waxaana bacaha Supermarket-ka lagu dhejin doonaa cinwaanadooda telefoonada iyo calaamado muhiim ah, taasoo u wanaagsan inay si weyn u xayeysiiyaan supermarket-ka. Haddaba sidee ayay dukaamada waaweyn u habeeyaan bacaha wax iibsiga, iyo w... Sii akhri »
Sahami habka daabacaadda bacaha balaastikada ee warshadeeyayaasha
Waqtiga boostada: Meey-12-2022
Codsiga bacaha waa mid aad u ballaaran nolosha dadka. Dadku waxay u isticmaalaan bacaha wax iibsiga si ay wax uga iibsadaan dukaamada waaweyn iyo dukaamada cuntada. Wax-soo-saarayaashu waxay u baahan yihiin bacaha baakadaha. Bacaha balaastikada ah ayaa lagu arki karaa meel kasta. Markaad isticmaalayso bacaha balaastikada ah, waxaanu fiiro gaar ah u siin doonaa faahfaahinta noocaas ah. A... Sii akhri »
Sida loo sameeyo bacda jaakada dharka
Isticmaalka bacaha ayaa nolosheena u keenay raaxo badan, laakiin sidoo kale waxay keentay dhibaatooyin deegaanka qaarkood. Sidaa darteed, si loo xaddido isticmaalka dadka ee bacaha, dukaamada waaweyn ee waaweyn ayaa bilaabay inay hirgeliyaan nidaam lacag-bixineed. Xaaladdan oo kale, isticmaalka bacaha ayaa ahaa ... Sii akhri »
Maxay yihiin isticmaalka bacaha wax iibsiga?
Hadda waxaan inta badan arki karnaa dhammaan noocyada bacaha balaastikada nolosheena. Waxaa ka mid ah, bacaha wax iibsiga ee balaastikada ah waa wakiillo caadi ah. Bacaha wax iibsiga ee kala duwan ayaa loo isticmaalaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha ee kala duwan. Si la mid ah waa run shirkadaha iyo xitaa ganacsiyada gaarka ah bacaha caagga ah ee la sameeyay. Marka la eego u... Sii akhri »
Qodobbada aasaasiga ah ee daabacaadda bacaha caagga ah iyo habeynta
Waqtiga post: Dec-01-2021
Bacaha dukaamaysiga Supermarket-ka iyo bacaha astaanta u ah waa bac aan xidhiidh badan la leenahay nolosheenna, kuwaas oo keena faa'iido badan. Marka la eego isticmaalka hadda ee suuqa, bacuhu hadda maaha hal daabac, waxayna bilaabeen inay yeeshaan qaabab iyo midabyo cusub oo m... Sii akhri »
Heerka codsiga iyo baaxadda bacaha jaakadaha
Waqtiga boostada: Nov-25-2021
Bacaha funaanadaha ayaa ah nooca ugu badan ee bacaha suuqa ka jira, waxaana sidoo kale loo yaqaan bacaha jaakadaha. Qaabkeedu waa sida jaakad dhexda iyo jaakad, sidaas darteed waxay leedahay magac noocaas ah. Wax soo saarka bacaha t-shirt caag ah waa mid fudud, laakiin isticmaalkoodu aad buu u ballaaran yahay. Sidaa darteed, waxaa si weyn loogu isticmaalaa ma... Sii akhri »
Wax nooga sheeg alaabtayada bacda t-shirt
Macaamiisha aanu la xidhiidhnay waxa ku jira qaar aan garanayn waxa ay tahay shandad jaakadaha ah, balse xaqiiqadu waxay rabaan inay dalbadaan shandad jaamac ah, balse waxa uu odhanayaa bacaha jaammada ah ama bacaha fudud. Dhab ahaantii, kuwani waa bacaha jaakadaha iyada oo aan loo eegin waxa loogu yeero. Sida magacaba ka muuqata, bac noocan oo kale ah waa qaab... Sii akhri »
123456Next> >> Bogga 1/18
No 43 dhismaha, YeeOn City, Yantian, FenggangTwon, Dongguan City, Guangdong gobolka Shiinaha
Sida loo doorto soo saaraha pl...
Siday kuwa sameeya bacaha balaastikada u sameeyaan pro...
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2022: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. H & X Electonic Co, Ltd Talooyin - Products Hot - Khariidadda bogga- amp Mobile
Gym Armband Bag, Kids Bag School , Eva Hard Case , Football qaabeeya Guddoomiyaha Case , Consumer Electronics Accessories , Eva Hard Shell Pencil Case loogu talagalay Carruurta 2,